Lavazza USA Xeerarka kuubanka
15% Ka Bax Goobta Waxaan haynaa 3 koodh kuuboon Lavazza maanta, oo qiimo -dhimis u leh lavazza.com. Dukaanleydu waxay keydiyaan celcelis ahaan 18.3% iibsashada kuubannada lavazza.com, iyadoo sicir -dhimista ugu weyn ee maanta ay tahay $ 25 oo ka baxsan iibsigaaga. Nambarkayaga xayeysiiska Lavazza ee ugu dambeeyay waxaa lagu daray Jul 9, 2021. Celcelis ahaan, waxaan helnaa koodh kuuban Lavazza 50 -kii maalmoodba mar.
Toddobaadkan Kaliya! 25% Ka Hayso Guud ahaan Lambarada xayeysiinta ee Lavazza, rasiidhyada & heshiisyada, Ogosto 2021. Keydso BIG w/ (2) Lavazza waxay xaqiijisay koodhadh xayeysiin & koodhadh kuubboon oo dhan. Dukaanleydu waxay keydiyaan celcelis ahaan $ 15.38 w/ lambarrada sicir -dhimista Lavazza, 25% off foojarada, heshiisyada dhoofinta bilaashka ah. Lavazza militariga & dhimisyada sare, dhimista ardayga, furayaasha iibiyaha & furayaasha Lavazza.com Reddit.
25% dheeraad ah Offiwde Ku soo dhowow boggayaga rasiidhada Lavazza, sahamin qiimo -dhimisyada iyo xayeysiisyada lavazza.us ee la xaqiijiyey ee Luulyo 2021. Maanta, waxaa jira wadar ahaan 9 rasiidh Lavazza iyo heshiisyo dhimis. Waxaad si dhakhso leh u shaandhayn kartaa koodhadhka xayeysiinta Lavazza ee maanta si aad u hesho dalabyo gaar ah ama la xaqiijiyay.